ကြံ့ဖွတ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန် သမ္မတ အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရ | Freedom News Group
ကြံ့ဖွတ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန် သမ္မတ အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရ
by FNG on February 4, 2011	Junta Chief Pick Up his loyalist follower as President of Burma Image by Prachatai via Flickr
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်သောကြာနေ့ တွင်ကျင်းပသည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှ စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အား မြန်မာ နိုင်ငံ၏ သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း သိန်းစိန် သည်
၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်သူ လူထု အုံကြွစဉ်က ရန်ကုန် မြို့ 
ဉ် ဗိုလ်ကြီး အဆင့် ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင် ရပြီး
၁၉၉၆ ခုနှစ် တွင် အသစ်ဖွဲ့ စည်း သည့် တြိဂံ တိုင်းဉ်
တိုင်းမှု အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ် စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ နှင့် ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့် 
ကို ရာ ထူးမှ ဖယ်ရှား သည့် အခါ နအဖ အစိုးရ အဖွဲ့ ဉ် အတွင်းရေးမှုး (၁) အဖြစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်
ဉ် ကွယ်လွန် ခဲ့သည့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း နှင့် အတူ တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။
ဦးသိန်းစိန် အား ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ၀င်များ နှင့် စစ်တပ် ကိုယ်စား လှယ်များ ၏ မဲဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်း
ရွှေ ၏ စီမံ မှု အရ ရွေးချယ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ၏ လွှတ်တော် ထဲဉ် သတင်းထောက် များ ၊မီဒီယာ များ အနေဖြင့် သတင်း ရယူခွင့်မရှိ
သည့် အတွက် နိုင်ငံ၏ သမ္မ တ ကို ဗို လ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေက ပဲ ရွေးချယ် ပေးခြင်း ဖြစ်မည် ဟု
၄၀၈ သိန်းစိန် ၁၇၁ တင်အောင်မြင့်ဦး ၇၅ စိုင်းမောင်ခမ်း
In Myanmar’s gleaming new capital, uncertain promise – Reuters (news.google.com)
Burma parliament begins choosing government (ctv.ca)
Burma set to elect new president (bbc.co.uk)
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Tags: Asia, Aung San Suu Kyi, Burma, Naypyidaw, Naypyitaw, Shwe Mann, Than Shwe, Thein Sein, Tin Aung Myint Oo, Union Solidarity and Development Party, Yangon	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← မူဘာရက် ကို ဖြုတ် ချ ခြင်း (live update)
စစ်ကိုင်းငလျှင် တစ်ဦးသေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များပြား →
February 5, 2011	army 88	#
စစ်အာဏာရှင် အသက်ရှင်ခွင့်ရအောင် အသက် ဆက်ပေးလိုက်တာ ရွေးကောက်ပွဲကို ပါဝင်ပြိုင်ယှဉ်ခဲ့ပါတီတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် သမတသိန်းစိန်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွေသန်းရွှေတို့ အောင်ပွဲခံလို့ နောက်ထပ် အနှစ် ၅၀ ဆယ် မြန်မာပြည်ကို စစ်တပ်က ပြန်လည်အုပ်ချူပ်သွားတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အာဏာသိမ်းလိုက်တာကို ပြည်သူတရပ်လုံး မသိလိုက်ကြဘူ။။။။
February 5, 2011	Lai	#
နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ၀င်ရောက် ပါဝင်တာ ပထမ အမှား ပါဘဲ။ အခု သူတို့ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။ နောက် တစ်ခေါက်အတွက် သင်ခန်းစာပေါ့။
February 5, 2011	De Line	#
February 5, 2011	ko ko zaw.....m'sia	#
February 5, 2011	dream	#
ငါတို့မြန်မာပြည်ဘာမှမကျန်တော့မှ သူတို့ထွက်သွားမှာလား ပြည်သူတွေရဲ့အသွေးအသားတွေ ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုအကုန်ယူသွားပြီးမှလား။စစ်အစိုးရကို ပူးပေါင်းပြီးအမြစ်ပြတ်တိုက်ထုတ်ချင်တယ်တိုင်းရင်းသားများနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစီးများရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ပေါ့။ စစ်အစိုးရကိုအောင်နိုင်ချင်ရင် အကြမ်းဖက်မှုနဲ့မှ တိုက်နိုင်မှာပေါ့။တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုဆိုတာသူတို့ဆီမှာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဘဲကြည့်တဲ့ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ တစောက်ကန်း စစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်တွေကို မသတ်နိုင်တော့ဘူးလား။ မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတောင်လုပ်ကြံခံခဲ့ ရတယ်။ ပြည်သူရဲ့ စက်ဆုပ်ရွှံရှာဖွယ်သတ်သ၀ါကြီး သန်းရွှေ အပေါင်းအပါတွေကိုတော့ဘယ်သူမှ မလုပ်ကြံကြဘူးလား။ စစ်အာဏာရှင်ခွေးသန်းရွှေကို ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ကြံနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ချစ်သောပြည်သူတိုင်းအတွက်။
February 4, 2011	Be Brave	#
ဆောက်သုံးမကျတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆောက်သုံးမကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဆောက်သုံးမကျတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ပြည်သူအလိုမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်လာပြန်ပြီပေါ့။မင်းတို့ ပြည်သူအပေါ်မှာအကြွေးတွေ အများကြီးတင်နေပြီ။ သေခါနီးလေး လိပ်ပြာလေးသန့်သွားအောင် ပြည်သူရဲ့ ခံစားချက်အတိုင်း တစ်ခါလောက်လုပ်ပေးကြည့်ပါလား။ ပြောလိုက်ရင်လည်း ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမှာစိုးလို့ စောင့်ရှောက်ရမယ် ဘာညာနဲ့။ အရပ်သားကျတော့အရည်အချင်းမမှီးသေးလို့ မအုပ်ချုပ်တတ်မှာစိုးလို့ နဲ့ ဘဲ ကိုယ့် ဘက်ကိုယ်ယက်သွားတာဘဲ။ ပြောတော့လည်း နှစ်ပေါင်း (20)လုံးလုံး ဒီမိုကရေစီ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးတွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံကောင်း တွေကို မနားမနေ ဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်ဆို။
ဒါကြောင့်မို့လို ဒီလောက်ကြာနေရတာပါဆို။ ပြီးတော့လည်း ပြည်သူမှာ အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်မရှိဘူးတဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေ တည်ဆောက်ပေးနေတာလဲ ပြည်သူအတွက် နှစ်(20)လုံးလုံး။
February 4, 2011	joker	#
စိတ်ချရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါပြီ … ဘာပဲပြောပြောထောက်ခံပါတယ် …
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ကျမ်းမာစွာ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ …..
February 4, 2011	ONSOB	#
မင်းလိုလင်ကောင်မပေါ်ပဲမွေးတဲ့ကောင်ကတော့ ဒီလိုဖြစ်လာမှမင်းအမေကဖင်ဆက်ခံရမှာဆိုတော့ စိတ်ချတဲ့အနေအထား ရှိနေပြီလိုပြောတာပေါ့ ဂျိုကား မင်းကထောက်ခံမှ မင်းအမေကဖင်ခံရမှာလေ အဲဒီတော့ မင်းကကြိုဆိုနေတာပေါ့ နိုင်ငံတော်သမ္မကြီး ကျမ်းမာမှမင်းအမေကို နောက်ထပ်မျိုးထိုးပေးလို့ရမှာဆိုတော့ မင်းက၀မ်းသာတာကိုး
အမေဖင်စိုမှ ဂျိုကား ရင်ဖိုဖြစ်နေရင် မင်းပါဖင်သွားခံလိုက်
February 6, 2011	သိကြားမင်း	#
မောင်ရင့် သမ္မတ အရုပ်ကြီး (အသစ်ကြီး လို့ပြောတာ) ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက် လိုက်အုံး။
လွှတ်တော်ရောက်သွားတဲ့ ရွှီးမန်း က စစ်တပ်ကို သမ္မတ ထက်ပိုပိုင် လို့လဲ အားမငယ် နဲ့လို့။ သွားပြီးအားပြိုင်မနေနဲ့လို့၊ စိတ်ချရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါပြီ… နောက်ပြီးရင် မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တို့၊ မုန့်လင်မယားဆိုင်တို့ ဖွင့်ပွဲတွေမှာ ဖဲကြိုးလေး ဘာလေး ဖြတ်နိုင်အောင်ပါ။ ဟိုး အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော် ကလဲ ဆိုရှယ်လစ် ခေတ်က သမ္မတကြီး ဦးစန်းယု (ဘယ့်နှယ် တရုတ်နာမည် လိုကြီးလဲဟ – ထားပါတော့) ဆို အဲလိုပဲလုပ်ရတာ။
February 8, 2011	Be Brave	#
ပြည်သူကို မဲပေးခိုင်တယ်။ ပြည်သူရဲ့မဲကိုထည့်မတွက်ဘူး။ နားလှည့် ပါးရိုက်လုပ်တယ်။ ပြည်သူရဲ့ ရွေးချယ်မှုလို့ပြောအုန်းမယ်။
အဲ့ဒီလူကြီးကို ဘယ်ပြည်သူကမှ မရွေးချယ်ဘူး။အကောက်ကျစ်ဆုံး နည်းလမ်းတွေကို သုံးရက်တယ်။ ပြည်သူရဲ့ မျက်နှာကို နည်းနည်းမှ မထောက်ဘူး။ အခွင့်အရေးများရခဲ့ရင်လေ ပြည်သူကလည်း မင်းတို့ မျက်နှာကို တချက် ပြန်ငဲ့ကွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ သူအပေါင်းအပါ တွေအာဏာာရတဲ့ နေ့ ဟာ ပြည်သူတွေအားလုံး အခံစားရဆုံးနေဘဲ။ NLD ပြောတာမှန် တယ်။ မဲသွားမပေးနဲ့ ဆိုတာ မဲသွားပေးလဲ မင်းတို့မဲ ကိုထည့်မတွက်ဘူးဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်။ ဥာဏ်မရှိလို့ မဲသွားပေးမိတယ်။ ပေးတဲ့သူ က တခြားရတဲ့သူက တခြားတွေကြီးဘဲ။ ပြည်ထောင်စု ကလိန်ကကျစ် နိုင်ငံတော်က ခေါင်းဆောင်များတို့ရေ နောက်ဆို ဘယ်တော့မှ မဲသွားမပေးတော့ပါဘူး။ နည်းနည်းခံသာအောင်လို့ပေါ့။ ဒေါ်စု ပြောသလို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဆိုတာ ရှေ့လူ ကိုနောက်လူကထိန်းနိုင်ရမယ်တဲ့။ အခုတော့ ပြည်သူက အာဏာရှင်တွေကို ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရဘူး။ ပြည်သူအလိုကျဆိုတာ အနည်းငယ်တောင်မရှိဘူး။ အာဏာရှင်အလိုကျကြီးပါဘဲလား။ ပြည်သူက ဒီလောက်မုန်းနေတာ မျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲတဲ့ မျက်နှာတွေ။ အီဂျစ်၊ တူနီးရှား၊ အယ်ဂျီးယား နိုင်ငံတွေတော့ အာဏာရှင်တွေအတွက် ငရဲလမ်းဖောက် နေပြီ တို့မြန်မာတွေအလှည့် ရောက်လာအုန်းမှာပါ။ ကိုယ့်ကို ကို သိပ်လည်း အထင်ကြီးမနေနဲ့။ သန်းရွှေက သေခါနီးမို့ သူ့ မသာကိုစောင့်ရှောင့် ဖို့ အာဏာပေးထားတာ။ ကိုယ့် မသာပါ တခါတည်း ဂူသွင်းပြီးသား ဖြစ်သွားမယ်။ သမိုင်းကြောင်းအရ မဖြစ်မနေ အာဏာကို ယူထားရတာပါဆို။ အာဏာကို မနှစ်သက်ပါဘူးဆို။ တပ်မတော်ရဲ့ စေတနာကို တော်တော်လေးစားတယ်။နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒိုင်စားတာဘဲ။
February 4, 2011	Lai	#
တိုင်း၇င်းသား တွေကို ငြီမ်းချမ်းရေး ဆိုပြီး လိမ်လိုက်၊ နယ်ခြားစောင့်ဆိုပြီး လိမ်လိုက်၊ နောက်ဆုံးတော့ ပြည်သူ တွေရဲ့ မဲတွေ လိမ်ကြပြန်။ ဒီကြားထဲ ကိုယ့်ဝမ်းရေး ဘဲ စဉ်းစား ကြတဲ့ လူတွေက ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ကြ နဲ့ သိုးသရေကို ခြုံတဲ့မြေခွေးတွေ အခုထိ အုပ်ချုပ်တုံးဘဲ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ တင် မက ကမ္ဘာတလွှား သိသင့်လောက်ပြီ။
February 4, 2011	thanshwenaing	#
thi par tal ae di shee htoke naing may so tar lal…ae di shee htoke thar thamada lote lot ka tot bay tot mhar toe tat mhar ma hote bu…myanmar naing ngan ka tot thaw par pe..phar naing ngan phyait yon ka lwae pee bar mha htoo mhar ma hote tot bu
February 4, 2011	Nyein Moe	#
De Lu , de mu nae/ , continue more next 50 years again,
February 4, 2011	Comments are closed.
Want Burma info in your inbox each morning?
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,728,722 hits